I-Village Riverside Retreat
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguPeter
Village Riverside Retreat, ejongene noMlambo iDeerfield kwindawo entle yaseShelburne Falls, Massachusetts. Relax ekuthuthuzelekeni kweli gumbi linomtsalane, igumbi lesibini elikumgangatho wesibini-kubandakanywa neveranda enkulu ekhuselweyo. Yabucala kwaye izolile kodwa ngamanyathelo kuphela ukusuka kwibhulorho yeentyatyambo ezinomfanekiso kunye nekhadi leposi-eligqwesileyo kwiziko lelali elineendawo zokutyela, iigalari, iindawo zomculo kunye nethiyetha yemiboniso bhanyabhanya.
Indawo yokungena yabucala kumgangatho wesibini wabucala amagumbi amabini kwifama yelali kunye negumbi lokuhlambela labucala elineshawa. Enkulu ekhuselwe kwiveranda ejonge umlambo kunye nemibono yentaba. I-Wifi yasimahla iyafumaneka.
UMlambo iDeerfield ungaphaya kwesitrato esinomda wegadi yeentyatyambo ethandekayo. Amanyathelo nje ukusuka kwiBhulorho yeentyatyambo, kunye nelali ebukekayo yaseShelburne Falls ebonelela ngeendawo zokutyela ezinkulu, amagcisa alapha ekhaya, ivenkile yekofu, kunye nekhemesti enekhawuntara ye-ayisikrimu ngqo "Bubomi Obumangalisayo!" Iimingxuma zomkhenkce, ukukhwela intaba, ukukhwela intaba, ukuloba, umculo, iimuvi, kunye nobuhle obunoxolo kukungqongile.
Ababuki zindwendwe baya kubonelela ngezitshixo kwaye banokubakho xa ufika ukuba ufuna uncedo ngeebhegi. Ababuki zindwendwe bafuna ukuba iindwendwe zonwabele ukubabucala kwazo, kodwa ziya kufumaneka ukuba uncedo luyafuneka ngaso nasiphi na isizathu.
Ababuki zindwendwe baya kubonelela ngezitshixo kwaye banokubakho xa ufika ukuba ufuna uncedo ngeebhegi. Ababuki zindwendwe bafuna ukuba iindwendwe zonwabele ukubabucala kwazo, kodw…